जनगणना अन्तिम चरणमाः तपाईँ छुट्नु त भएन ? | ईमाउण्टेन समाचार
जनगणना अन्तिम चरणमाः तपाईँ छुट्नु त भएन ?
जाजरकोट । ‘मेरो सहभागिता मेरो गणना’ नाराका साथ २५ कात्तिकदेखि देशभर सुरु भएको जनगणना आज बिहीबार सकिँदैछ । तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर जनगणनाकाे काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
जनगणनाका लागि नाम टिपाउन छुटेकालाई आजसम्म समय दिइएकाे छ । जाजरकाेटमा जनगणनाका लागि २ सय ४० गणक र ६० जना सुपरिपेक्षक खटिएका थिए ।
प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार जाजरकोटमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ । जाजरकोटमा यसपटक करिब २ लाखको हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
२०६८ अनुसार जाजरकोटको कुल जनसंख्या १ लाख ७१ हजार ३०४ थियो । यसपटक १ लाख ९० हजारदेखि २ लाख पुग्ने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको जिल्ला जनगणना अधिकारी जनक बोहराले बताए । उनका अनुसार महिला ९४ हजार ७ सय ७३ र पुरुष ९४ हजार ५ सय ५० तथा अन्य ७ जना रहेको र केही थपघट हुन सक्ने आँकलन गरिएकाे छ ।
देश/समाज‐मा वर्गिकृतJajarkotNews, janagadana
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय सचेतना गोष्ठी सम्पन्न
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जनगणनाको सूचीकरण अझै अनिश्चित
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ : ५४ हजार कर्मचारी परिचालन गरिने
माघ १ गतेबाट ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ को नमूना जनगणना सुरु गरिने
जनगणनामा खस भाषा जगेर्ना गर्नेगरी विवरण दिन सुझाव